U-Anna Mathison: ubomi bomntu, i-biography. USergei Bezrukov no-Anna Mathison: iindaba zakamuva malunga neveli
Yonke into yokudala ilungile, inetalente kwaye yakha ubomi bomntu ngendlela yakhe. Umlawuli kunye nomgcini-mfanekiso u-Anna Mathison ukhangeleka njengamaqhawe e-cinema yase-Italy yama-60s, italente yakhe inomona ngabalingane bakhe, kwaye ubomi bakhe bubomxholo wengxoxo yethu. Umfazi omhle ubonakalisa kakuhle umbono wakhe wehlabathi ngokusebenzisa i-lens yekhamera yekhamera. Yaye ngubani okanye yintoni umthombo wokuphefumlelwa kwakhe? Mhlawumbi impendulo ibonakala ebomini bomntu ka-Anna Mathison. Sifuna ukwazi! Ukulindela ukukrakra okungenakuphazamiseka ... kwaye ngokuqhubekayo kwisicatshulwa, siya kuphendula oku: "Ukubaluleka komntu odumileyo kungabonakaliyo kubomi bakhe bomntu." Ngaba i-biography ye-Mayakovsky iya kugqitywa ngaphandle kweLily Brick? Hayi, kuba wayengumthombo wokuphefumlelwa kwakhe.
I-Syndrome yomfundi ohloniphekileyo: I-Biography ka-Anna Matison
Ubulumko bentolongo ithi eyona nto iyona intshaba yezinto ezilungileyo. Kodwa i-biography yokudala yomlawuli iphikisa le ntetho. Nguye u-Anna ophelelekileyo owamnceda ukuba abe nkwenkwezi yokuqondisa ekhaya kunye nomdlalo.
Irisonan Mathison wazalwa ngoJulayi 1983. Waphumelela ngeentlonelo ezivela esikolweni esiphakeme kwaye wangena eyunivesithi kwiziko lehlabathi. Kwikhosi yokuqala waba ngumthunywa wenkululeko kwiinkampani zethelevishini yase-Irkutsk. Umama-intatheli eyaziwayo-wayenelungelo lokuxelela iincwadana zakhe zobugcisa nentombi yakhe. Emva kancinci, intombazana ekhangayo, eneengqiqo kunye neyokudala yaqaphela kwaye yanikelwa ukuba ibe ngumvelisi omkhulu.
Ngo-2004, umvelisi omncinci wasekhaya udala umgca wokudala kunye nomqondisi u-Yuri Dorokhin. Yile ndlela i-studio ye-REC. Ukukhangisa, iifilimu zorhwebo, iimveliso zomsindo, iividiyo-iminyaka engama-4 i-studio ka-Anna no-Yuri beyona nto ibalulekileyo kwi-Irkutsk. Kodwa ubunjani buka-Anna bubunzima kwisakhelo esincinci sorhwebo, kwaye udala umdlalo omfutshane womculo "Umoya uphucule" ngokwemisebenzi kaYevgeny Grishkovets.
Lo msebenzi wavula amathuba amatsha ka-Anna. I-Grishkovets yaba nomdla kwifilimu yokuqala yokungabikho kwezoqoqosho kunye no-Anna kunye nentsebenziswano. Matis, ephefumlelwe yindumiso yomdlali weRussia umdlalo, ushiya uMama. Yonke into ifana nomthetho we-genre. EMoscow, nangona kunjalo akayi kuba yerubha, kodwa iitalente ezikhoyo ukuzenza ziyakwazi. Kwaye uyayilinga njani amandla ngokuzama! Uza kuba ngcono - ukuhlamba kwimida yeengqumbo ezikhanyayo, kodwa hayi-uya kulahleka kwii-expanses zayo. UMatison akazange alahlekelwe, kuba wayazi ngokuqinisekileyo ukuba kwakungekho ngokwaneleyo ukubona iimpawu zexesha elizayo, kufuneka bakwazi ukuwasebenzisa ngokuchanekileyo. Nantsi imeko yesimo seVGIK, studio ka Natalia Ryazantseva kunye ne diploma ebomvu - oku kuchanileyo.
"Milky Way" u-Anna Mathison: awukwazi ukusinda ekufeni
"Ukwaneliseka", "Ngaphandle kwesicatshulwa," "Indlu," iMifula "" Yolki "... Yonke le mi sebenzi yaba yintetho kwi" Milky Way "- ifilimu yemilingo eyatshintsha ubomi bokudala no-Anna Matison. Ngomdlalo omtsha wonyaka u-Anna wenza njengomgcini wesikrini kunye nomlawuli. Kwinqanaba lesigxina, uMatison wabona uKhabensky okanye uDyuzhev, kodwa isigwebo senziwe ngendlela yaso. Kwaye kwakungummangaliso weNtsha weNtsha, isipho esifanelekileyo, sifikelele ngempumelelo kumlawuli onetalente kunye nomfazi omhle ngoBukumkani Bokugqibela. Ummiselo uSergei Bezrukov ukwenza inxaxheba ephambili eMilky Way "iveki ezintathu ngaphambi kokuba ubalekele eBaikal, apho kuqhutywe khona ukudubula - uphawu oluvela phezulu.
USergei Bezrukov kuMatison: umdlali othe tye okanye indoda ethandekayo?
U-Anna Matison kunye noConstantin Khabensky babenembono eyahlukileyo kwimbali yefilimu ethi "Milky Way." UMatison wabuyela ngokuphindaphindiweyo kwisicatshulwa kuye, kwaye, ngeengcebiso kumlawuli ophetheyo, wamema uSergey Bezrukov kwiintlanganiso. Bobabini isicatshulwa kunye no-Anna benza impembelelo kumdlali. USergei wathembisa ukucinga ngako, kodwa wayesazi ukuba akayi kuvuma ngenxa yeshedyuli eqinile. Kodwa ukuba abo babini bazimisele ukudlala indima yabo ebomini, umhlaba uya kuhamba ngecala. Ngako oko kwakuseLake Baikal u-Anna Matison noSergei Bezrukov.
Amanqamzana asekuhlaleni acinga isiqithi saseOlkhon kwindawo engcwele apho ukungabi namsebenzi kushiya umntu, ukutyhila izinto ezibalulekileyo kuye. Yonke ifilimu isetyenziselwe ukuphuhliswa kobudlelwane phakathi kweBezrukov kunye neMatison. Iimbono ezikhethekileyo ezi zibini zazingenakunakunyuswa - ngoko iimvakalelo zangempela zizalelwa. Kwaye ulwalamano olukhethekileyo phakathi komlawuli kunye nomenzi, ohlala ehamba kunye nokudubula, akanalo nantoni na - ababukeleyo banokuqiniseka ngaloo nto.
Mayelana neBezrukov kunye noMatison bathetha ngokunyanisekileyo emva kokubuyela eMoscow. USergei washiya kwaye unyanisekileyo wanikezelwa udliwano-ndlebe, apho wayemthanda uAna. Umdlali we-actor wambiza umfazi onengqondo enkulu, umlinganiselo kunye nomlinganiselo wecandelo elipheleleyo leqiniso. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, waqhawula umfazi owawuthatha umfazi ofanelekileyo. Ukuqhathanisa enye yeembini ezithandekayo abalandeli ngelizwi elinye eliboshwe noMatison.
Ezinye zabalandeli bakaSergey bavuya, becinga ukuba u-Irina Bezrukov abe ngumqinela umfazi, ngelixa abanye bebhikisana nokunyaniseka, bamqinisekisa ukuba wayeyindoda engowesifazane kwaye enhle kunoko-Anna. Kwikhosi kwakukho naziphi iimbambano: kwanabudala, ubude kunye nobukhulu beMatis noBezrukova baxoxwa ngabo bonke abangenalwazi. Yaye isibini esithandanayo sithatha isetyhula ukukhusela kwaye sasingabonakali imfihlelo kumntu. Kodwa kungekudala izithintelo ziyahlukana ngokukhawuleza ...
U-Anna Mathison noSergei Bezrukov: iindaba zakutsha nje
Mathison kunye neBezrukov zibonakala zibonakala zikarhulumente, kungekhona zonke iintloni ngeparazzi. Iseshoni yesigxina eshukumisayo somagazini i-Elle no-Sergei isityhilelo sothando oluthile oluthile luphonsa umlilo emlilweni. Akukho mntu uzibungabaza ngayo iimvakalelo zabo, baxela kuphela ngomtshato womtshato kunye nabantwana. Kwaye siya kuhlala sibukela ubomi bomntu ka-Anna Matison. Emva koko, isithunzi somntwana uMatison noBezrukov sinokubonakala kungekudala. Yaye ngoxa uAna ezama ukufumana abahlobo noKristina no-Ivan Smirnov - abantwana baseBezrukov abavela kumdlali we-Petersburg. Hlalani nathi kunye nokufumana iindaba zakutshanje.
Ukususwa kwe-fibroids yamanzi
I-Taurus: i-horoscope ekwindla ka-2013
Imbali yeBrith Maxor
I-pie yesiFrentshi i-Kish kunye ne-broccoli kunye noshizi
Inkukhu ikhutshana kweso sibini
Indlela yokujamelana neengxaki zezinyo?
Pakeke ikhekhe ngebhanana kunye ne-nut glaze
Umlingo wesiphunga. Indlela yokukhetha iziqhumiso